မျောက်လွှဲကျော် - ဝီကီပီးဒီးယား
Temporal range: 13.8–0 Ma
Gibbon species of different genera; from top-left, clockwise: Pileated gibbon (Hylobates pileatus), western hoolock gibbon (Hoolock hoolock), yellow-cheeked gibbon (Nomascus gabriellae), siamang (Symphalangus syndactylus)
အရှေ့တောင်အာရှတွင် ဖြန့်ကျက်တွေ့ရှိရမှုပြ မြေပုံ
မျောက်ဝံမျိုးတွင် အငယ်ဆုံးနှင့် လူသိအနည်းဆုံး ဖြစ်သော်လည်း လူနှင့်အတူဆုံးသော မျောက်ဝံမျိုးကား မျောက်လွှဲကျော် ဖြစ်သည်။ မျောက်လွှဲကျော်သည် နောက်ခြေ နှစ်ချောင်းဖြင့် လူကဲ့သို့ မတ်မတ် ရပ်နိုင်ပြီးလျှင် ခါးမကုန်းဘဲ လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ မျောက်လွှဲကျော်၌ အမြီးလည်း မရှိချေ။ မျောက်လွှဲကျော် အမျိုးမျိုးရှိရာ အားလုံး၏ မူလနေထိုင်ရာ ဒေသသည် အင်ဒို - မလေးနိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်။ အကြီးဆုံး အမျိုးမှာ ဆိုင်အာမန်း မျောက်လွှဲကျော်မျိုးဖြစ်၍ အမြင့် ၂ ပေခွဲမှ ၃ပေနီးပါးထိ ရှိသော်လည်း ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ၁၂ ပေါင်ထိသာရှိသည်။ ယင်း၏ ထူးခြားသော အသွင်အပြင်တစ်ခုမှာ မည်း၍ပြောင်နေသော မျက်နှာတစ်ဝိုက်တွင် အမွှေးဖြူများ ရစ်လျက်ရှိသည်။ ခြေနှင့် လက်ထိပ်များပေါ်တွင် အဖြူ၊ သို့မဟုတ် ကောက်ရိုးရောင်အမွှေးများ ဖုံးအုပ်လျက်ရှိသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးတွင် အထီး၏ အရောင်သည် မည်း၍ အမ၏အရောင်သည် အဖြူတွင် အဝါရောင်အနည်းငယ်သန်းလျက်ရှိသည်။
မျောက်လွှဲကျော်သည် ရေသောက်ချိန်၌သာ အောက်သို့ဆင်း၍ အခြားတစ်ချိန်လုံး သစ်ပင်ပေါ်တွင်နေလေ့ရှိသည်။ သွားလာရာတွင် မျောက်များကဲ့သို့လေးဖက်ထောက်မသွားဘဲ မတ်တတ်ရပ်၍ သွားတတ်သည်။ လက်များသည် တုပ်ခိုင်သန်မာ၍ လက်တံရှည်၏။
ထိုလက်များဖြင့် တောထဲရှိ သစ်ပင် တစ်ပင်မှ တစ်ပင်သို့၊ သစ်ကိုင်း တစ်ကိုင်းမှတစ်ကိုင်းသို့ လွှဲ၍လွှဲ၍ ခုန်သွားလေ့ရှိသည်။ သစ်ကိုင်း တစ်ကိုင်းကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် မြဲမြံစွာကိုင်ဆုပ်၍ ပေ ၂ဝ မှ ၄ဝ ထိဝေးသော အခြားအကိုင်းတစ်ကိုင်းသို့ လွှဲ၍ အခြားလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဖမ်းနိုင်သည်။ မြေကြီးမှ အထက်ပေ ၅ဝ ကျော်မြင့်သော သစ်ကိုင်းများပေါ်၌ မတ်မတ်ရပ်၍ အောက်သို့မကျအောင် ပြေးလွှားသွားနိုင်သည်။ မြေပြင်ပေါ်၌ကား ထိုကဲ့သို့ လျင်မြန်စွာ မပြေးနိုင်ကြချေ။
မျောက်လွှဲကျော်သည် တောနက်တွင်း၌သာ နေလေ့ရှိသော တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ သစ်ရွက်များနှင့် သစ်သီးများကို ခူး၍ သစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းပေါ်တွင် လူကဲ့သို့ မတ်မတ်ထိုင်ကာ စားလေ့ရှိသည်။ နေဝင်ချိန်ရောက်လျှင် သင့်တော်သော အကိုင်းတစ်ကိုင်းကို ရွေး၍ အိပ်စက်ကြ၏။ မျောက်လွှဲကျော်အထီးသည် အမနှင့်တစ်ကွ သားငယ်သမီးငယ်နှင့်အတူ အမြဲမပြတ်စုစုရုံးရုံး နေထိုင်လေ့ရှိ၏။ သားငယ်များသည် မိဖနှင့်အတူ ၆ နှစ်အထိ နေ၍ ၆ နှစ်ကျော်မှ အိုးအိမ်ခွဲ၍ သီးခြားနေထိုင်ကြသည်။ တောထဲရှိ မျောက်လွှဲကျော်များသည် ပျမ်းမျှ အသက် ၂ဝ မှ ၃ဝ အထိ ရှည်သော်လည်း ဖမ်းဆီးရမိထားသော မျောက်လွှဲကျော်များကား ထိုမျှလောက် အသက်မရှည်ကြချေ။
↑ Groves၊ C.P. (2005)။ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M. (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ Baltimore: ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ pp. 178–181။ OCLC 62265494။ ISBN 0-801-88221-4။
↑ Mootnick, A. (2005). "A new generic name for the hoolock gibbon (Hylobatidae)". International Journal of Primatology 26 (4): 971–976. doi:10.1007/s10764-005-5332-4.
BNF: cb11976149c (data)
အနောက်ပိုင်း မျက်ခုံးဖြူ မျောက်လွှဲကျော်
အရှေ့ပိုင်း မျက်ခုံးဖြူ မျောက်လွှဲကျော်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မျောက်လွှဲကျော်&oldid=707197" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၁:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။